အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကျဆုံးရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက် … – PVTV Myanmar
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကျဆုံးရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတဲ့ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံး မင်္ဂလာပါ။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက သတင်းမီဒီယာသမားများကို ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း၊ သတင်းမီဒီယာတွေကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်း၊ သတင်းတုသတင်းယောင်များ ဖန်တီးဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အင်တာနက်လိုင်းများဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ရုပ်သံလိုင်းများဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်သည့် ကိရိယာများအား ဖြုတ်သိမ်းခြင်း၊ ပြည်သူလူထုအား မတရားသော ဥပဒေပုဒ်မများဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း စတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့သိပိုင်ခွင့် (Right To Know) ကို ထိပါးစော်ကားမှုတွေ အမျိုးမျိုးလုပ်နေပေမယ့်လည်း ပြည်သူလူထုနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားဖို့၊ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ အစဉ်မပြတ်သိရှိနေစေဖို့ကို သတင်းမီဒီယာသမားများနဲ့ အတူ PVTV အဖွဲ့သားများ ကလည်း အခက်အခဲများကြားကနေပဲ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားအားထုတ်လျက်ရှိပါတယ်။ သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူလူထုရဲ့ နားမျက်စိပါးစပ်တွေကို ပိတ်လို့မရဘူးဆိုတာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနားလည်အောင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး သက်သေပြကြရအောင်ပါ။
ဒီညနေမှာလဲ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်ခင်မမမျိုးနဲ့ PVTV အဖွဲ့သားတွေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့အစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးရင်း ပြည်သူလူထုရဲ့ သိပိုင်ခွင့်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံသောအစီအစဉ်တွေ ဆက်လက် ဖန်တီးတင်ဆက်သွားနိုင်ဖို့ကို PVTV အဖွဲ့သားများက သစ္စာဓိဌာန်ပြုပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
PVTV(Public Voice Television) ရဲ့ အစီအစဉ်များကို
PVTV ရဲ့ ယခု FB စာမျက်နှာ၊
YouTube Channel (https://www.youtube.com/channel/UCJuCQN7bM8X0kR4TOwE3Ftw) တို့အပြင် မဇ္ဈိမ (Mizzima) နဲ့ DVB ရုပ်သံလိုင်းများတွင်လဲ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Like – 19K Share – 1499
2021-05-06 at 11:32 AM
တစ်ခုခုလိုချင်ရင် တစ်ခုခု ပေးဆပ်ရမှာဘဲ
2021-05-06 at 11:34 AM
(People Defence Force ) PDF ရဲ့ အလံတော်က
ကျရာနေရာက ပါဝင် တော်လှန်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်
ကွန်ပြူတာမှာ အများသုံးစာဖိုင် နာမည်ကလည်း PDF ပဲနော်
ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ – “ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကာလ ဒလန်ရှင်းနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ” ကို ထည့်ပေးလိုက်တယ်
Htoi Mai Naw says:
2021-05-06 at 11:36 AM
2021-05-06 at 11:37 AM
ရခိုင်ဒေသအတွင်းကိစ္စ အဝဝကိုဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင် AA ကိုပစ်ပယ်၍မရပါ။
2021-05-06 at 11:49 AM
မြန်မာနိုင်ငံက အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရတဲ့လူဆို ဒေါ်စုက ခွင့်ပြုပေးထားတာပဲ နဂိုထဲက တိုင်းရင်းသားထဲလဲမပါဘူးလေ နေစရာအိမ်တွေပါ ဆောက်ပေးထားတာ ဘာကို တောင်းပန်ရမှာလဲ။ သေချာရှင်းပြပါအုံး။ အတူတူ တိုက်ပွဲဝင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တောင်းပန်ပေးပါဆိုတော့ ငါတို့က ဘာလုပ်မိလို့လဲ သူတို့ကို
2021-05-06 at 12:01 PM
မြန်မာမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ရခိုင်တွေပဲ ပိုင်တယ် ရိုဟင်ဂျာအတွက်ခွဲမပေးနိုင်ပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ချင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ လက်ခံမှ ဖြစ်မှာလေ
2021-05-06 at 12:14 PM
ဒီတစ်ယောက်နဲ့ ဝင်းမြတ်အေးတို့ NUG ထဲရှိနေသ၍တော့ NUG ဟာ နိုင်ငံတကာမှာ လူရာဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ EAO အချို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုရဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။
Kyaw C Thu says:
2021-05-06 at 12:20 PM
Htin Aung Linn says:
2021-05-06 at 12:24 PM
နောက်မေးတဲ့ အခါ မှားခဲ့သမျှကို တောင်းပန်ဖို့ပါ ထည့်ပြောပေးပါ ပြည်သူလူထု အသံကိုကြားအောင်ပြောပေးပါ
Free to air ဆိုရင်ပိုထိရောက်ပါတယ်။လိုင်းနဲ့မှကြည့်လို့ရတဲ့tv channelကတော့ သိပ်မထူးပါဘူး
2021-05-06 at 12:25 PM
စစ္တပ္CDM စစ္သားတစ္ေယာက္ဆီက အခုပဲ သတင္းတစ္ခုရထားတယ္။ ျဖစ္နိုင္ေခ်လည္း မ်ားတာမို့၊ ပြင့္လင္းရမယ့္ကိစၥမို့ အားလုံးႀကိဳသိထားနိုင္ေအာင္ ေျပာပါမယ္။
စစ္တပ္က ခန္႔တဲ့ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးေတြ ဇြပ္ဇြပ္ဇြပ္ခံေနရတဲ့ကိစၥဟာ စစ္တပ္အေနနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ေခါင္းကိုက္ရတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနၿပီ။ ရပ္ကြက္႐ုံးတစ္႐ုံး တပ္စုတစ္စု ခ်ထားနိုင္တဲ့ အေျခအေနအထိ စစ္အင္အားဟာ မေတာင့္တင္းဘူး။ KNUနဲ႔ KIA ဘက္မွာ ျခင္းက်ားေျမဩဇာထုတ္လုပ္ရမယ့္ တာဝန္ကလည္း ႀကီးသကိုး။
အုပ္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ စစ္ေကာင္စီအတြက္ ဘာထိေရာက္တဲ့အလုပ္မွ မလုပ္နိုင္ဘဲ အဇြပ္ခံေနရတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနတာမို့ အုပ္ႀကီးေတြ ျငဳပ္သီးစားမိသလိုျဖစ္ၿပီး ၂၄နာရီ ပူစပ္ပူေလာင္ ဝဋ္ခံေနၾကရတယ္။
ျပည္သူေတြရဲ့ အေနအထားဟာ ေသနတ္ကိုင္မထားရင္ အုပ္ခ်ဳပ္မရဘူးလို့ စစ္ေကာင္စီက ေတြးၿပီ။ ကင္းထိုင္ေစာင့္ေပးစရာ အင္အားကလည္း မရွိ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အသက္ဝင္ဖို့ ျပည္သူ႔စစ္ဥပေဒကို အသက္သြင္းေတာ့မယ္လို့ သူ႔ဆီက သိရတယ္။
ျပည္သူ႔စစ္ဥပေဒဆိုတာ အရပ္သားေတြကို လက္နက္ေပးၿပီး အခ်င္းခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းမွာမ်ိဳး။ သူ႔ဆီက ဒီပေရာ့ဂ်က္ကို ဘယ္ေကာင္ဦးေဆာင္မွာလဲဆိုတာကအစ သိထားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီသတင္းေတာ့ ထုတ္မေျပာေတာ့ဘူး။ သိသင့္သူေတြဆီပဲ ပို့ေတာ့မယ္။
စစ္တပ္က ဒီကိစၥကို အနည္းငယ္ေတြေဝေနေသးတယ္။ အရပ္သားေတြလက္ထဲ ေသနတ္ေပးဖို့ သူတို့အခ်င္းခ်င္း မယုံဘူး။ ျပည္သူကဘက္က ဒလန္ေတြကိုလည္း သူတို့ေၾကာက္တယ္။
အခု ဒီကိစၥ ေျပာေနခ်ိန္မွာပဲ Confirm လုပ္ၿပီးသား သတင္းတစ္ခု တက္လာတယ္။ NLD လက္ထက္မွာ ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ကေန အစိုးရ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ ထည့္ထားတဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (ေထြအုပ္) ကို ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ ျပန္ထည့္လိုက္ၿပီဆိုတဲ့သတင္းပဲ။ ဒီကိစၥဟာ ျပည္သူ႔စစ္ဥပေဒကို အသက္သြင္းဖို့ ေျခလွမ္းအစလည္း ျဖစ္နိုင္တယ္။
နာမည္ကသာ ျပည္သူ႔စစ္ေနာ္။ တကယ္က ဒလန္စစ္ပဲ။ ဆယ္အိမ္ေခါင္းကအစ ေသနတ္ကိုင္ လူပါးဝေတာ့မယ့္ဘဝကို က်ေရာက္ေတာ့မွာ။
အေကာင္းဘက္က ေတြးလို့လည္း ရပါတယ္။ ေသနတ္မျမင္ဖူးတဲ့ေကာင္ေတြလက္ထဲ ေသနတ္ထည့္ေပးလိုက္တာဟာ ထင္းေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းထက္ မပိုဘူး။ ျပည္သူဘက္က လက္ဦးမွုယူနိုင္ရင္ ရန္သူ႔လက္နက္ ကိုယ့္လက္နက္ ျဖစ္လာေတာ့မွာ။
ဒလန္အစစ္ကို ဘယ္လိုရွာမလဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး၊ဆယ္အိမ္ေခါင္း၊ ရာအိမ္မွူး၊ Non-CDM စာေရးအထိ သိပ္ရွင္းလင္းတဲ့ ဒလန္ပဲ။
အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္ရဲ့ ဦးေႏွာက္ဟာ အလုံးစုံပ်က္သုဥ္းေရးအျပင္ ဘာမွသုံးစားမရေတာ့ဘူး။ မၾကာခင္မွာ စစ္တပ္ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးမိေနတဲ့ က်ဆုံးနိုင္ငံဟာ အႀကီးအက်ယ္ ႐ုပ္လုံးေပၚလာေတာ့မွာ။
Ei pansello page မွ
ဖေဖေ ကြီး says:
2021-05-06 at 12:28 PM
2021-05-06 at 12:30 PM
မတရားမှုကို အားပေးအားမြှောက်ပြုခဲ့တာကလည်း အကြမ်းဖက်နည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ သိရက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်စေ၊ ဉာဏ်မမီလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်စေ ကိုယ့်အမှားအတွက် တာဝန်ယူရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ
Lin Maung says:
2021-05-06 at 12:43 PM
ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်စမ်းပါ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအပြည့်လုပ်ပလိုက် ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ကြီးက အဆင်မပြေဘူး
ပြီးတော့ မှားထားရင် ပြန်တောင်းပန်ရတယ် ရာထူးကြီးရင် ပိုလို့တောင် ဆိုးသေးတယ် တာ၀န်ခံမှုပိုရှိရတယ် ရူးသလို နှမ်းသလို ကျပ်မပြည့်သလို ပေါကြောင်ကြောင် အကွက်မနင်းစေချင်ဘူး
ႏြဲ ့ယဥ္ ထြန္း says:
2021-05-06 at 1:03 PM
2021-05-06 at 1:19 PM
Pyae Sone ငါ​တောင်ရွံလာပြီဆိုလို့ crph nugကိုပဲအစက​ထောက်ခံခဲ့သလိုလို accountထဲဝင်ကြည့်​တော့ ​ဘောမတဲ့အဆင့်​တောင်မဟုတ်ဘူး အ​ချောင်းလိူက်စုပ်ပြီးဥပါငုံထားတဲ့​ကောင်ဖြစ်​နေတာ အခုcomment​တွေထဲမှာအ​မေစု crph nug blame​​နေတဲ့​ကောင်​တွေကြည့်လိုက် ppကသာအနီ​တွေ တင်ထားတာ​တွေက ​ဘောစုပ်​တောင်မဟုတ်ဘူး ဖင်ပါလျက်မယ့်​ကောင်​တွေ
2021-05-06 at 1:54 PM
အရမ်းအကြောက်လွန်နေတဲ့ သူတွေ တော်တော်များတယ်ဟ comment မှာ ဖက်ဒရယ်ကို အရမ်းကြောက်နေကြတာ😄😄😄
Myat Noe Phyu says:
မန့်တွေကလည်းကွယ် ရိုဟင်ဂျာအရေးပြောနေကြတယ် ပြောနေတဲ့သူတွေကကော ဘယ်လောက်လူ့အခွင့်အရေးလေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးလဲ သိချင်မိတယ်။ အခုဖြစ်နေတာ ရိုဟင်ဂျာအရေးမဟုတ်ဘူး တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူသားမျိုးနွယ်တစ်မျိုးလုံးအရေးဖြစ်တယ်။ ခွဲခြားပြီး မြင်နေတည်းကိုက မဟုတ်တော့ဘူး။ အခုချိန်မှာ လိုအပ်ချက်တွေကို နောက်မှဖြည့် အာဏာရှင်ကျဆုံးဖို့အရေး အရင်တွေး
Hein Zay Htun says:
2021-05-06 at 3:31 PM
Khin Ma Ma Myo, Apologise for dehumanising Rohingya people with an insect metaphor on Facebook back in 2016, or RESIGN
2021-05-06 at 4:02 PM
အလှူု ငွေတွေ ဘာလုပ်ထားလည်း! ? ပြည်သူက နေ့တိုင်သေနေတယ် လက်နက်ဝယ်သင့်ပြီးလိုထင်းတယ် နော်
we know and acknowledge how smart you are but you should apologize to the people, first. btw ur FB acc is no more deactivated? 😁
2021-05-06 at 5:52 PM
A fascist is always fascist
Pine Zay Ye Htut says:
ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြကို ေတာင္းပန္ပါ
2021-05-06 at 6:37 PM
Pls msg to public, three months old NUG fight for aged 70’s wrong way.
2021-05-06 at 7:36 PM
တော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘူး၊ နှိမ်နင်းရေးတဲ့၊ မအလတို့ ထိရှ။
Thant Zin Phyo says:
2021-05-06 at 8:32 PM
စကားလုံးတွေအပေါ် သုံးသပ်တဲ့ ဆောက်ကျင့်က ခုထိ မပျောက်သေးတဲ့ နိုင်ငံ …
NUG စကတည်းက တစ်ချိန်ကျရင် ဆောက်ဆရာကြီးတွေရဲ့ ဝေဖန်သံတွေ ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ တွေးထင်ထားပေမဲ့ ခုလောက် မြန်မြန်ဖြစ်လာမယ်လို့ မတွေးခဲ့ …
ပန်းတိုင်အတွက် အားပျော့လာတာနဲ့ အချင်းချင်း ပတ်ရမ်းဖို့က အလားအလာ ပိုများလာတယ် …
သူပုန်နဲ့ သောင်းကျန်းသူဆိုတဲ့ ဝေါဟာရရဲ့ ခြားနားချက်ကို ကိုယ်သိတယ်ဆိုတိုင်း တစ်နိုင်ငံလုံးက သိမယ် မထင် …
အဓိကက အဲဒိတစ်သိုက်ကို မကြိုက်လို့ ရည်ညွှန်းမှန်း သိရင် လက်ခံလိုက်ကြပေါ့ …။
ခုတော့ ဆဆရက တွေ …
ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ကြလေ …
သူတို့လို နံမည်ရှိအောင် အရင်လုပ်ကြလေ …။
Aung Kyaw Hpone Pyae says:
2021-05-06 at 9:59 PM
ဘောပြားမ ရာသီလာပြီး ကြောင်နေတာလား မဟုတ်လည်း 92သုံးပြီးဖီးတက်နေတာလား အရင်မေးပေးကြစမ်းပါ
Kyaw Min Htet says:
2021-05-06 at 10:59 PM
ရိုဟင်ဂျာတွေကို အင်းစက်နဲ့နှိုင်းခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ဖင်ဆစ်စိတ် ကိန်းအောင်းနေတဲ့ အမြင် နဲ့ Post အတွက်တောင်းပန်ပါ၊ မဟုတ်ရင် ထွက်ပါ
ကျွန်တော်တို့ အနာဂတ်မှာ ခင်ဗျားတို့လို ဖက်ဆစ်စိတ်
ကိန်းအောင်းနေတဲ့လူတွေ လုံးဝ အလိုမရှိဘူးဗျ
Soe Soe Aye says:
2021-05-07 at 1:12 AM
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ကိုယ်တာ၀န်ယူပြီး ဖြေရှင်းပါ ဒေါ်ခင်မမမျိုး
2021-05-07 at 3:38 PM
Sophia Myint says:
Moe Mg says:
2021-05-08 at 10:04 PM
ခဲ့တုန်းက စစ်တပ်က ရိုဟင်ဂျာနဲ့
ဒူးမထောက်ဘူးဟေ့ ဆက်ပျံမည် (သီချင်း)…